cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး: Ripple (ပုံဆွဲ - $8000) • ငှက်ဖျားရောဂါ
Розыгрыш криптовалюты: Ripple — $80001 မိနစ်ပိုင်းဖတ်ရှုခြင်း
ပို့စ်အမျိုးအစား:Заработок на розыгрышах и конкурсах
သွားပါကြေးနန်းအောက်ခြေ နှင့်စာနယ်ဇင်းက start.
sign up ပြုလုပ်ပါвсе каналы спонсоров.
20 марта 2021 ယခုနှစ်, выберут → 20 ဆုရရှိသူ, которые разделят между собой → $2000 долларов в криптовалюте Ripple, и каждому достанется по → $100 တွင် XRP.
Первые → 13 ဆုရရှိသူ получат → VIP-места в закрытые группы ведущих трейдеров на криптовалютном рынке, по версии журнала Forbes, а остальные →7ဆုရရှိသူ получат → Торговые индикаторы, для работы с любыми активами на любой бирже, с точностью до → 97%.
TOP-150 + ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိဘဲငွေရှာဘို့စီမံကိန်းများ
Taxi -Money - ငွေထုတ်သည့်ဂိမ်းတစ်ခု
TOP-100 + ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပါဘဲနှင့်အတူငွေရှာဘို့ဆိုက်များ…
SuperKopilka - အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် passive ဝင်ငွေ
Sorare - NFT ကဒ်စိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်း
Kryptex - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ cryptocurrency တူးဖော်ခြင်း။
သင်ဤအကြောင်းအရာကြိုက်လျှင်, ထို့နောက်သင်၏လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေပါ, သူတို့ကြိုက်လိမ့်မယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်:-)
အမှတ်အသားများ (Tags): Cryptocurrency, Money, Giveaway, Dollar, Free, ကွေးနနျးစာ, Бесплатно, cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး, hoax, Crypto, Доллары, Win, Ripple, XRP
ယခင်ပို့စ်Розыгрыш криптовалюты: Bitcoin – $2000
MetaMask ဖြင့် Ethereum လက်ဆောင်.
ဤလိပ်စာသို့ Tether လက်ဆောင်ပေးပါ။.
Сканируйте QR-код или скопируйте адрес ниже и вставьте в свой кошелёк, Tether ပမာဏအချို့ကို ပေးပို့ရန်.
ဤလိပ်စာသို့ Cardano လက်ဆောင်ပေးပါ။.
Сканируйте QR-код или скопируйте адрес ниже и вставьте в свой кошелёк, Cardano အချို့ကို ပေးပို့ရန်.
ဤလိပ်စာသို့ Xrp ကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။.
ဤလိပ်စာသို့ Ontology လက်ဆောင်.
Сканируйте QR-код или скопируйте адрес ниже и вставьте в свой кошелёк, Ontology အချို့ကို ပေးပို့ရန်.
ဤလိပ်စာသို့ Aeternity ကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။.
Сканируйте QR-код или скопируйте адрес ниже и вставьте в свой кошелёк, အချို့သော Aeternity ပေးပို့ရန်.
မှန်မှန် ပေးသည်။ 8 နှစ်ပေါင်း. သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်: $10 မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အခမဲ့ဖြစ်သည်။, а при вложении от $20, + ещё бонус $20, и того $30, для первых инвестиций и пассивного дохода.
WMZQIWIWMEWMUWMBYandex ငွေQIWIပြီးပြည့်စုံသောငွေBitcoinLitecoinBTC-ePayPal USDPayPal RUBSkrillPayzaEasyPayEgoPayOKPayLiqPayW1 USDW1 RUB Sberbankတယ်လီဘဏ်Alpha ကိုနှိပ်ပါ။MessengerРусСтандартPrivat24 USDПриват24 UAH Card USDCard RUBCard UAH
WMZWMRWMEWMUWMBYandex ငွေBitcoinပြီးပြည့်စုံသောငွေBitcoinLitecoinBTC-ePayPal USDPayPal RUBSkrillPayzaEasyPayEgoPayOKPayLiqPayW1 USDW1 RUB Sberbankတယ်လီဘဏ်Alpha ကိုနှိပ်ပါ။MessengerРусСтандартPrivat24 USDПриват24 UAH Card USDCard RUBCard UAH